माओवादीले आधा-आधा गरौं भन्दा नमानेको कांग्रेस चाउरियो गोरखामा :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
पालुङटारलाई नमूना बनाउन खोजेको थिएँ, सफल भइनँ: बाबुराम भट्टराई
गोरखा, जेठ ६
गोरखाका ११ मध्ये ९ पालिका प्रमुख नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेको छ।
०७४ मा माओवादी ९ वटै पालिका प्रमुखमा हारेर २ वटा पालिकामा सीमित भएको थियो।
यसपालि माओवादीले ७ पालिका खोसेपछि कांग्रेसले २ पालिका प्रमुखमा चित्त बुझाएको छ।
कांग्रेसले गोरखामा कसैसँग पनि गठबन्धन गरेन। तर माओवादीले गण्डकी गाउँपालिका र गोरखा नगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग गठबन्धन गरेको थियो।
गठबन्धन गरे पनि दुबै पालिकामा प्रमुख मात्रै माओवादीले जित्यो, उपप्रमुख भने एक्लै लडेको नेपाली कांग्रेसले जितेको छ। गठबन्धन गरेका ठाउँमा माओवादीले जसपालाई भोट नहाल्दा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन्।
कहाँ कसले जिते?
नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार कृष्णबहादुर राना गोरखा नगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भए। उनी ५ वर्षअघि कांग्रेसका उम्मेदवार राजनराज पन्तसँग पराजित भएका थिए।
उनै पन्त यसपालि कांग्रेसबाट उम्मेदवार थिए। रानाले जोसँग पाँच वर्षअघि हारे अहिले उनैलाई हराएर मेयर निर्वाचित भएका छन्।
रानाले ८ हजार ९ सय ६४ मत ल्याउँदा कांग्रेसका पन्तले जम्मा सात हजार एक सय ८ मत मात्रै पाएका थिए।
०७४ मा कांग्रेसबाट पन्त र माओवादीबाट राना मेयरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा पन्तले रानालाई एक हजार पाँच सय ३४ मतले हराएका थिए।
यसपालि जसपासँग गठबन्धन गर्दा माओवादीले धेरै मतान्तरले कांग्रेसका पन्तलाई हराएको छ।
उपमेयरमा भने कांग्रेसकी मसलीमाया थोकर पुन (सपना) निर्वाचित भइन्। उनले सात हजार चार सय ५३ मत ल्याउँदा माओवादी-जसपाका संयुक्त उम्मेदवार नारायण खत्रीले छ हजार सात सय १८ मत मात्रै ल्याएका थिए।
पन्तलाई कांग्रेसकै गढबाट भोट आएन
निवर्तमान मेयर पन्त कांग्रेसबाट मेयर उम्मेदवार दोहोरिएका थिए। मेयरको टिकट वितरणमा गुटको प्रभाव हाबी भयो। कांग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिले विश्वदेव श्रेष्ठलाई गोरखाको मेयरको टिकट दिए पनि पन्त समूहले स्वीकार गरेनन्, श्रेष्ठमाथि युवाहरूले कुटपिट गरे। पार्टी र नगर कार्यालय तालाबन्दी भएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले पन्तलाई नै मेयर उम्मेदवार बनाएका थिए।
पन्त कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेनिकट हुन्। पाण्डे सभापति शेरबहादुर देउवा निकट छन्। गोरखाको टिकट वितरणमा पनि पाण्डेको पहलमा देउवामार्फत मनोनयन दर्ताका दिन हस्तक्षेप गरिएको आरोप समेत छ।
केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरी टिकट पाएका पन्तलाई यसपालि आफ्नै पार्टीका नेता/कार्यकर्ताको सहयोग रहेन। विशेषगरी वडा नम्बर ६ र ७ मा पन्तका लागि भोट कम आयो। वडा नम्बर ६ मा त कांग्रेस उम्मेदवारविरूद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी नै पर्‍यो। स्वतन्त्र उम्मेदवार राजेन्द्रकुमार जोशी वडाध्यक्ष निर्वाचित भए। उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत समर्थन गरेको थियो।
गुलाफको फूल चिन्हमा स्वतन्त्र उम्मेदवार राजेन्द्रकुमारले वडाध्यक्ष जित्दा अन्य पदमा भने कांग्रेस उम्मेदवार विजयी भए। गोरखा सदरमुकामको मुख्य बजार क्षेत्र रहेको यो वडाबाटै मेयर र वडाध्यक्षमा कांग्रेसलाई कम भोट गयो।
कांग्रेसको गढ मानिएको वडा र ०७४ मा पन्तलाई धेरै मत आएकै वडा नम्बर ६ मा यसपालि कांग्रेसविरूद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवार उठे भने उनलाई माओवादीले सहयोग गरेको थियो। यहाँबाट माओवादीका मेयर उम्मेदवार रानालाई कांग्रेसलाई भन्दा धेरै मत खस्यो। वडा नम्बर ७ बाट पनि पन्तलाई धेरै मत आएको थिएन।
गोरखा नगरपालिकामा जसपा र माओवादी गठबन्धन गरेको र पन्तलाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट पनि सहयोग नहुँदा उनले मेयर हारेका छन्।
पालुङटार नगरपालिकामा यसपालि केन्द्रबाट हस्तक्षेप भयो- गठबन्धन गर्न। पहिले माओवादीसँग र उम्मदेवारी दर्तापछि जसपासँग गठबन्धन गर्न कांग्रेस केन्द्रले दबाब दिएको थियो।
पालुङटारमा बाबुराम भट्टराईको पकड छ। त्यसैले जसपा र कांग्रेसबीच चुनावी गठबन्धन गर्न दबाब थियो। जसपालाई मेयर छाड्दै कांग्रेसले उपमेयर लिने गरी केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको थियो। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वैशाख १६ मा उम्मेदवारी फिर्ता लिने दिन निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा आफ्ना उम्मेदवार दीपकबाबु कँडेलको उम्मेदवारी फिर्ताको पत्र नै पठाइदिएका थिए। तर ढिला गरी पत्र प्राप्त भएको भन्दै कांग्रेसका कँडेलको उम्मेदवारी कायमै रह्यो।
यसको दुई दिनपछि पनि केन्द्रको दबाबमा कँडेलले घुमाउरो ढंगले केन्द्रको निर्देशन पालना गर्न आफू तयार रहेको विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेका थिए। तर जसपा कांग्रेसबीच गठबन्धन हुन सकेन। जसपाले नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेको घोषणा गर्‍यो। मेयर आफूले लिएर जसपाले एमालेलाई उपमेयर दियो तर यो गठबन्धनले चुनाव जित्न सकेन।
पालुङटार नेकपा माओवादी केन्द्रले जित्यो। मेयरमा माओवादी उम्मेदवार विवस चिन्तन निर्वाचित भए भने उपमेयरमा माओवादीकै बन्दना पाण्डे निर्वाचित भइन्। पाण्डे माओवादी नेता हितराज पाण्डेकी छोरी हुन्।
विवसले ६०७२ मत ल्याएर मेयर जित्दा जसपाका प्रेमबहादुर गुरूङ पराजित भए। उनले ५७१७ मत ल्याएका थिए। एमालेसँग गठबन्धन गरे पनि जसपाका गुरूङलाई मेयर जित्न ३५५ मत पुगेन।
निवर्तमान मेयरसमेत रहेका कांग्रेस उम्मेदवार दीपकबाबु कँडेल भने धेरै पछि रहे। उनलाई मेयर हुन एक हजार ७५ मत पुगेन। पालुङटारमा जसपा बलियो भएको क्षेत्र, त्यसमाथि एमालेको मत थपिँदासमेत माओवादीका उम्मेदवारले मेयर र उपमेयर जितेका छन्।
०७४ मा माओवादीका चिन्तन कांग्रेसका कँडेलसँग थोरै मतान्तरले मेयर निर्वाचित भएका थिए। त्यसबेला उपमेयर भने माओवादीले नै जितेको थियो। पालुङटारमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्दाभन्दै तयारी गर्न र चुनावी प्रचारसमेत गर्न नपाउँदा आफूहरूले सोचेजस्तो मत ल्याउन नसकिएको कांग्रेसका स्थानीय नेताहरू बताउँछन्।
धार्चे गाउँपालिकामा यसपालि कांग्रेस नराम्रोसँग हारेको छ।
०७४ मा तीन वडा (४, ५ र ६) र गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जितेको कांग्रेसले यसपालि कुनै पनि वडा जितेन भने प्रमुख र उपप्रमुख पनि माओवादीले जित्यो।
धार्चेको अध्यक्षमा माओवादीका लक्ष्मण गुरुङ अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा सुनिला गुरुङ निर्वाचित भएका छन्। कांग्रेसका अध्यक्ष उम्मेदवार सन्तोष गुरूङ र उपाध्यक्ष उम्मेदवार फूलमाया गुरूङ धेरै मतान्तरले पराजित भए। यसअघि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहेकाहरूलाई नै कांग्रेसले उम्मेदवारमा दोहोर्‍याएको थियो। पार्टीले दोहोर्‍याए पनि सन्तोष र फूलमायालाई जनताले जनप्रतिनिधिका रूपमा दोहोर्‍याएनन्।
यहाँ माओवादीका लक्ष्मण गुरुङले ३७७१ र सुनिला गुरुङले ३७७९ मत ल्याएका छन्। जबकी सन्तोष गुरुङले १९४६ र फूलमाया गुरुङले १९७६ मत प्राप्त गरेकी थिइन्।
माओवादीबाट यसपालि गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित लक्ष्मण भने ०७४ मा कांग्रेसका सन्तोषसँगै गाउँपालिका अध्यक्षमा हारेका थिए। त्यसबेला लक्ष्मण नयाँ शक्ति नेपालबाट अध्यक्षका उम्मेदवार थिए।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति धार्चेका प्रमुख लक्ष्मणसहित अधिकांश नेता/कार्यकर्ता माओवादीमै फर्किएका कारण यसपालि माओवादीले कांग्रेसबाट धार्चे खोस्न सक्यो।
अध्यक्षमा पराजित भएका कांग्रेसका सन्तोष गुरूङले यसपालि कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच चुनाव भएको बताए।
‘धार्चेमा कति कांग्रेस र कति कम्युनिष्ट रहेछन् भन्ने यो चुनावबाट थाहा भयो,’ उनले भने, ‘जतिले हामीलाई मत दिए उनीहरूको संरक्षण मात्रै गर्न सके कांग्रेस दीगो रहन्छ। केही व्यक्तिहरू कांग्रेसको खोल ओढेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न छेपाराले रङ फेरेजस्तै प्रवृत्ति देखाउँदा अन्तरघात भयो। अन्तरघात गर्नेहरूसँग पार्टी सधैं सचेत हुनुपर्दछ।’
उनले चुनावमा आर्थिक चलखेलसमेत भएको आरोप लगाए।
‘चुनावमा बुथ क्याप्चर गर्न ठिटा र बिटा प्रयोग गरियो। सिंगापुरे लुंगी, ज्याकेट र त्रिपाल वितरण गरेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो,’ अरू पार्टीका उम्मेदवारप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘हामीसँग ठिटा थियो तर बिटा भएन। कांग्रेस गरिबको पार्टी हो। ३६४ दिन हाम्रो कित्तामा रहेका साथीहरू पैसाको प्रभावमा ३६५ औं दिन अर्को कित्तामा उभिए। पैसाको प्रभावमा सिद्धान्त कसरी बदलिन्छ, इमान्दारी कसरी बेचिन्छ र संकल्प कसरी तुहिन्छ भन्ने यो चुनावले देखें।’
गण्डकी गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रले जसपासँग गठबन्धन गरेको थियो। माओवादीले गाउँपालिका अध्यक्ष जित्यो तर जसपाका उम्मेदवार उपाध्यक्षमा हारे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका दिपक तिमिल्सिना (साकार) अध्यक्ष जित्दा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार होमबहादुर राना पराजित भए। ०७४ मा रानाले साकारलाई हराएका थिए। यसपालि साकारले जसपासँग गठबन्धन गरी कांग्रेसका रानालाई हराइदिएका हुन्।
यहाँ उपाध्यक्ष भने कांग्रेसकी ललिता अधिकारी निर्वाचित भइन्। उनी ०७४ मा पनि कांग्रेसबाट उपाध्यक्ष नै निर्वाचित भएकी थिइन्।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ६ हजार ३ सय २६ मत ल्याए भने कांग्रेसका रानाले ४ हजार ६ सय ५५ मत प्राप्त गरेका थिए।
उपाध्यक्षमा विजयी अधिकारीले ४ हजार ८ सय २१ मत प्राप्त गरेकी थिइन्। माओवादी-जसपा गठबन्धनबाट उपाध्यक्ष उम्मेदवार जसपाका भीमप्रसाद श्रेष्ठले ४ हजार ४४ मत प्राप्त गरेका थिए।
भिमसेन थापा गाउँपालिका:
भिमसेनथापा गाउँपालिका यसपालि कांग्रेसबाट माओवादीले खोसेको छ।
माओवादी उम्मेदवार लोकप्रसाद बन्जारा अध्यक्ष निर्वाचित भए। यहाँ दलहरू एक्काएक्लै चुनावमा होमिएका थिए।
कांग्रेसका अध्यक्ष उम्मेदवार रोशन गुरूङ बन्जारासँग पराजित भए। बन्जाराले ४ हजार ९८० मत ल्याए भने गुरुङले ४ हजार ८ सय ८५ मत ल्याएका थिए। गुरूङ ९५ मत नपुग्दा अध्यक्ष हुनबाट रोकिए। यो कांग्रेसको गढ भएको क्षेत्रका रूपमा लिइन्थ्यो।
तर कांग्रेसकै गढ मसेलमा माओवादीले कांग्रेसबाट वडाध्यक्ष खोस्यो। गढ मानिएकै क्षेत्रमा कम भोट आउँदा रोशनले अध्यक्ष जित्न सकेनन्।
यहाँ कांग्रेसले उपाध्यक्ष भने जितेको छ। कांग्रेसकी अमृता वस्ती उपाध्यक्ष भइन्। माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार जुनु माया श्रेष्ठलाई हराएर कांग्रेसकी वस्तीले ४ हजार ९ सय ४९ मत ल्याएर उपाध्यक्ष जितेकी हुन्। यो गाउँपालिकाको २, ३, ४ वडा मात्रै कांग्रेसले जित्यो भने माओवादीले गाउँपालिका अध्यक्षसहित वडा नम्बर १, ५, ६,७ जितेको छ। कांग्रेसले एकै वडाका व्यक्तिलाई अध्यक्ष र उपाध्यक्षको टिकट दिँदा पार्टीभित्रै असन्तुष्टि थियो। कांग्रेसले यहाँ निवर्तमान अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कसैलाई पनि यसपालि उम्मेदवारमा दोहोर्‍याएन।
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका:
योपटक पनि बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा माओवादीका विष्णु भट्ट र सनमाया गुरूङ दोहोरिए। उनीहरू ०७४ मा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जितेका थिए।
भट्टले ५ हजार ७१९ मत ल्याएर कांग्रेसका उम्मेदवार जितबहादुर घलेलाई हराए। घलेले ४ हजार ८६४ मत ल्याएका थिए। भट्ट गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदा बारपाक सुलिकोटमा तुलानात्मक रूपमा राम्रो काम गरेको भन्दै गोरखामा प्रशंसासमेत बटुलेका थिए।
यो कांग्रेस गोरखा सभापति नन्दप्रसाद न्यौपानेको गृह गाउँपालिका हो। यहाँ कांग्रेसले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र धेरै वडाध्यक्ष पनि जितेको छ। ०७४ मा पनि कांग्रेसले यो गाउँपालिका जितेको थियो।
यसपालि कांग्रेसका राजु गुरुङ अध्यक्षमा ५५५६ मतसहित निर्वाचित हुँदा नेकपा एमालेका कृष्णबहादुर नेपालीले ४८३३ मतसहित पराजित भए।
उपाध्यक्षमा पनि कांग्रेसकै कल्पना नेपाली विजयी भइन्। उनी ०७४ मा पनि उपाध्यक्ष जितेकी थिइन्। उनले ५६३१ मत प्राप्त गर्दा एमालेकी सीता दाहालले ३८१६ मत पाइन्।
यो गाउँपालिकामा पनि माओवादीबाट पुरानै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दोहोरिए। अध्यक्षमा रमेश थापा र उपाध्यक्षमा इन्दिरा तिवारी निर्वाचित भइन्। उनीहरू ०७४ मा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जितेका थिए।
अध्यक्षमा यसपालि रमेशले ५४७४ मत ल्याए भने कांग्रेसका उम्मेदवार नारायणप्रसाद लामिछानेले ४४३२ मत ल्याएर पराजित भए। उपाध्यक्षमा ४९९६ मत ल्याएर इन्दिराले जित्दा कांग्रेसकी शर्मिला श्रेष्ठले ४४३२ मत मात्रै ल्याएकी छन्।
यो गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचित भए। ०७४ मा यो पालिका कांग्रेसले जितेको थियो।
०७४ मा अध्यक्ष हारेका माओवादी केन्द्रका दीपक देवकोटाले यसपालि ३७८७ मतसहित अध्यक्ष जिते भने पहिले उपाध्यक्ष हारेकी अनिता भुजेल यसपालि निर्वाचित भइन्।
यहाँ कांग्रेसका गोविन्द गुरूङ अध्यक्षमा र इन्द्र गुरूङ उपाध्यक्षमा पराजित भए।
यो गाउँपालिकामा कांग्रेसले अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित ५ वडाध्यक्ष जितेको छ।
अध्यक्षमा ज्ञानेन्द्र गुरूङ ५४०३ मतसहित विजयी भए भने उनले माओवादीका नवराज पुडासैनीलाई हराएका हुन्। पुडासैनीले जम्मा ४१६८ मतमात्रै ल्याए। पुडासैनी माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठनिकट मानिन्छन्।
यो गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ मा पनि कांग्रेसले जित्यो। यही वडा जौवारीमा नारायणकाजी श्रेष्ठको घर पर्दछ। ०७४ मा यो पालिका कांग्रेसले जितेको थियो। त्यसबेला उपाध्यक्ष जितेकी रिता देवकोटा यसपालि पनि उपाध्यक्ष उम्मेदवार भई जितेकी छन्।
सिरानचोक गाउँपालिकामा पराजित नवराज पुडासैनीले पराजयको पीडा भुलेर जनताको सेवामा लागिरहने बताएका छन्।
‘पराजयको अनपेक्षित पीडाले सेवामा लागिरहने अभिष्टबाट विचलित हुने छैन,’ उनले भने, ‘इमान्दारिताको अपमानले अन्तर्घातको सम्मान नहुने कुरामा आशावादी छु।’
विकटमा रहेको चुमनुब्री पनि माओवादीले कांग्रेसबाट खोसेको छ।
०७४ मा अध्यक्ष जितेका धनबहादुर गुरूङलाई नै कांग्रेसले यसपालि उम्मेदवार बनाएको थियो। तर उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार निमा लामासँग पराजित भए। लामा ०७४ मा माओवादीबाट अध्यक्षका उम्मेदवार हुँदा गुरूङसँग पराजित भएका थिए।
अध्यक्षमा जितेका लामाले एक हजार ६ सय २४ मत ल्याए भने कांग्रेसका गुरुङले १३ सय ११ मत मात्रै ल्याएका छन्।
०७४ मा यहाँ उपाध्यक्ष जितेको माओवादीले यसपालि पनि उपाध्यक्ष जितेको छ।
लक्ष्मी गुरुङले एक हजार ५ सय ६५ मत ल्याउँदा कांग्रेसकी मेतोक छोकी लामाले एक हजार ३ सय ७ मत ल्याएकी छन्। सात वडामध्ये यहाँ कांग्रेसले ५ वडाध्यक्ष जितेको थियो।
तर गाउँपालिका अध्यक्षमा भने मतान्तर धेरै रह्यो।
९ पालिका जितेपछि के भन्छ माओवादी?
कांग्रेसबाट ९ पालिका प्रमुख खोसेको माओवादीले यसलाई महत्वपूर्ण सफलता भनेको छ। बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति गठन गर्दा यसअघि माओवादीलाई लागेको धक्का अब पूर्ति गर्ने बाटोमा आफूहरू रहेको माओवादी नेताहरू बताउँछन्।
माओवादी नेतासमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सांसद हरिराज अधिकारी (कुमार) ले माओवादीले ९ पालिका खोस्नुमा केही कारण रहेको उल्लेख गरेका छन्।
०७४ मा चुनाव हारेपछि अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता आफ्ना क्षेत्रमा निरन्तर लागिपर्दा अहिले जनताले मत दिएको उनको भनाइ छ।
०७४ मा जितेका दुई गाउँपालिका प्रमुखहरूले तुलनात्मक रूपमा अरू पालिकाका भन्दा राम्रो काम गरेको कारण त्यसको मूल्यांकन जनताले यसपालि गरेको उनको भनाइ छ।
यसबीचमा माओवादीमा अन्तरविरोध देखिएको थिएन। ‘पार्टीभित्रको अन्तरविरोध निर्वाचनको योजनामा बदलिँदै गएको थियो,’ उनले भने, ‘माओवादीविरूद्धका शक्तिहरू आन्तरिक कचिङ्गलमा फसेका थिए।’
उनले माओवादी छाडेर जानेहरूप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दा पनि माओवादीप्रति पुन:आकर्षण भएको रूपमा अर्थ लगाएका छन्। ‘पार्टी वैचारीक राजनीतिक स्पष्टतासहित सङ्गठित थियो र जनताले पनि भरपर्दो सेवक माओवादीलाई ठान्दा धेरै पालिकामा सफल भइयो,’ उनले भनेका छन्।
माओवादीका जिल्ला नेता अकुर तिमल्सिना (आयाम) ले नेतृत्वको सचेतपूर्ण पहलकदमी र कार्यकर्ताको सकारात्मक सुझावले पार्टीले धेरै पालिका जितेको बताए।
‘नेतृत्वको सचेतपूर्ण पहलकदमी र कार्यकर्ताको सुझावले धेरै पालिका जितिएको छ। यो माओवादीप्रतिको विश्वास हो,’ उनले भनेका छन्, ‘विजयलाई चुनौतीसहित अवसरका रूपमा लिँदै निरन्तर जनताको सेवामा लागिरहनेछौं।’
के भन्छन् कांग्रेसका जिल्ला सभापति?
आफूहरूले सोचेजस्तो नतिजा नआएको कांग्रेस गोरखाका सभापति नन्दप्रसाद न्यौपाने बताउँछन्। गठबन्धन गर्न केन्द्रले दबाब दिँदा चुनावी प्रचार पनि राम्रोसँग गर्न नपाइएको उनले बताए।
चुनावी गठबन्धन गर्न गोरखामा उम्मेदवारी दर्ता अघि र पछि गरी १० पटकसम्म दलहरू छलफलमा जुटेका थिए।
‘कतै गठबन्धन गर्न भनेर अन्तिमसम्म केन्द्रको हस्तक्षेप गरिरह्यो,’ उनले भने, ‘एक्लै लड्दा पनि कम्तिमा आधाजति पालिका जितिएला भन्ने थियो तर आन्तरिक समस्या लगायतले गर्दा पनि धेरै ठाउँ गुमाउनुपर्‍यो।’
कांग्रेसले दुई पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख तथा गोरखा नगरपालिका र गण्डकी गाउँपालिकामा उपप्रमुख जितेको छ।
कांग्रेसले भने सत्ता गठबन्धनमै रहेको जसपालाई पनि साथसाथै लैजानुपर्दा चुनावी गठबन्धन सम्भव हुन नसकेको बताएको छ। जसपाले तीन पालिकामा दाबी गरेको थियो।
कांग्रेस गोरखाका सचिव किशोरजंग थापाले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा भएका हारजित र अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति देखा पर्दा कांग्रेसले धेरै पालिका गुमाउनु परेको बताए।
‘कांग्रेसले एउटा अर्को दलसँग मात्रै चुनावी गठबन्धन गर्न मिल्दैनथ्यो, चुनावी गठबन्धनको संयोजन कांग्रेसले गर्नुपर्ने हुँदा सत्तामा रहेका सबै दललाई साथसाथै लैजानुपर्ने जिम्मेवारी थियो,’ सचिव थापाले भने, ‘माओवादी त तालमेलका लागि चार पालिका भए पनि हुन्छ भनिरहेकै थियो तर जसपा मानेन।’
उम्मेदवार छनौटलगायत आन्तरिक कारणले पनि कांग्रेसले पराजय भोग्नुपरेको उनले बताए। ‘उम्मेदवार छनौट गर्दा लोकप्रियतालाई मुख्य मापदण्ड बनाउन सकिएन,’ उनले भने, ‘महाधिवेशन भर्खरै भएको र त्यसको रापताप बाँकी नै थियो। त्यसमाथि आन्तरिक समस्या रहेकोले धेरै ठाउँ हारिएको हो।’
पहिले जितेका ठाउँ अहिले पनि जितिन्छ भन्ने 'ओभर कन्फिडेन्स' ले गर्दा पनि पार्टीले जित्न नसकेको उनले बताए।
गृहनगर पालुङटारमा जसपाका उम्मदेवारलाई मेयर जिताउन जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई दिनरात खटे। टोल-टोलमा पुगेर उनले मध्यरातसम्म पनि भाषण गरे, चुनावी माहौल बनाए।
तर पालुङटारमा एमालेसँग गठबन्धन गर्दा पनि जसपा उम्मेदवार प्रेम गुरूङ मेयरमा पराजित भए।
भट्टराईले पालुङटारलाई आफूले नमूना बनाउन खोजेको तर सफल नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘मेरो गृह नगरपालिका पालुङटारको निर्वाचन र परिणामवारे भएका सार्वजनिक टिप्पणीप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘जसपाले मेयरमा झिनो मतले हारे पनि जनताले दिएको विश्वास र मायाप्रति कृतज्ञ छु। मैले पालुङटार नगरपालिकालाई सबै प्रमुख दलको सहमतिमा मोडेल नगरपालिका बनाउन खोजेको हुँ, सफल भइनँ। कसैप्रति गुनासो छैन,’ उनले भने।
जसपाका गोरखा अध्यक्ष यानप्रसाद भट्टले गठबन्धन गर्न दलहरूबाट सहयोग नपाइएको बताएका छन्।
‘राष्ट्रिय गठबन्धनका कारण एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाँदा कठिन हुने र कतै न कतै तालमेल गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भइदियो,’ उनले भने, ‘कुनै दलबाट राजनीतिक गद्दारी र कुनै दलबाट अहम दम्भको पराकाष्टाका कारणले गणितमा हामी फेल भएको कुरा सहर्ष स्वीकार गर्दछौं।’
गोरखामा जसपाले कुनै पनि पालिका प्रमुख र उपप्रमुख जितेको छैन। पालुङटारमा ३ वडा मात्रै जितेको छ। ०७४ मा जसपाले ५ वडा जितेको थियो।
पालिकामा एमाले शून्य, जितेका वडा पनि घट्यो
गोरखामा एमालेले ९४ मध्ये जम्मा १० वडा मात्रै जितेको छ। ०७४ मा एमालेले १४ वडा जितेकोमा यसपालि चार वडा गुमाएको हो।
आरूघाट गाउँपालिकामा एमालेले चार वडा, गण्डकीमा एक वडा, गोरखा नगरपालिकामा दुई वडा, धार्चे गाउँपालिकामा दुई वडा, शहिदलखन गाउँपालिकामा एक गरी १० वडा एमालेले जितेको हो।
गोरखाका ९४ वडामा माओवादीले ४३, कांग्रेस ३७, एमाले १०, जसपा ३ र स्वतन्त्र १ जनाले वडा जितेका छन्।
कांग्रेस-माओवादी प्रतिस्पर्धी हुँदा गरेनन् गठबन्धन
गोरखामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन्। यहाँका दुई प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा कांग्रेस र माओवादीको उस्ताउस्तै मत छ। तर निर्णायक बाबुराम भट्टराईको तत्कालीन नयाँ शक्ति (अहिलेको जसपा) छ। एमालेको भने गोरखामा खासै प्रभाव छैन। ०७४ मा माओवादी-एमाले वामगठबन्धनबाट चुनाव लड्दा एक प्रदेश सभा सदस्य एमालेले जितेको थियो। अन्यत्र कांग्रेस र माओवादीले जितेका हुन्।
आठ पटकसम्म सत्तागठबन्धनका दलबीच चुनावी तालमेलका लागि गोरखामा बैठक बसेको थियो। कांग्रेसलाई माओवादीले ११ पालिकामध्ये आधा-आधा गरी गठबन्धन गर्न माग गरेको थियो तर कांग्रेसले त्यति दिन नसकिने अडान राखिरह्यो।
चुनावी तालमेल सम्भव नभएपछि दलहरूले मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति नै गरेका थिए। तर उम्मेदवारी दर्तापछि पनि चुनावी तालमेलमा दलहरू सक्रिय रहे। गोरखा नगरपालिका र गण्डकी गाउँपालिकामा माओवादीले उपप्रमुख छाडेर प्रमुख आफूले लिने गरी गठबन्धन गर्‍यो तर यहाँ जसपाका उम्मेदवारहरू पराजित भए।
जसपाले पनि पालुङटारमा एमालेसँग गठबन्धन गर्‍यो। तर सफल हुन सकेन। अहिले चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा आएपछि माओवादीका नेताहरूलाई आफ्नो शक्तिमा विश्वास नगरेर गठबन्धनमा लागेको कार्यकर्ताले नै आलोचना गरिरहेका छन् भने ९ पालिका प्रमुख गुमाएपछि कांग्रेसमाथि नेतृत्वको असक्षमता र दम्भ देखाएको आरोप छ।
जसपाले सबै स्थानीय तहमा उम्मेदवार नउठाउँदा पनि माओवादीलाई चुनाव जित्न सहज भएको थियो। यस्तै माओवादीले अधिकांश उम्मेदवार 'जनयुद्ध' लडेका र ०७४ मै पराजित भएकाहरूलाई उठाएको थियो।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ६, २०७९, ०७:०७:००